कमल रेग्मी हाल दोहा कतार । पैसा कमाउने, घर परिवार पाल्ने सुखी र खुसी हुने । अझ भनाैं गाउँको पहाडबाट सहरमा सर्ने अनि सहरमै घर बनाउने । परदेश लाग्दै गर्दा सबैको मनमा यस्तै यस्तै सपना हुन्छन् । त्यही ठूलो सपना बोकेर म पनि कतार आएर कतारको पाईप कम्पनीमा काम गर्दैछु । तर अहिलेको परिस्थिती हेर्दा लाग्छ, पैसा कसका लागि कमाउनु ? के को लागि कमाउनु ? आखिर जिन्दगीभन्दा ठूलो पैसा होइन रहेछ ।
सायद यस्तै लागेको होला अरु परदेशीलाई पनि ।तर मर्नुअघि नै खुट्टा तान्न हुँदैन भन्थे बुढापाकाले । हो रहेछ । काम गर्नैपर्छ ।आफ्नो र परिवारको लागि परदेशी भूमिमा पसिना बगाईरहेको छु ।कतार भनेको नियम कानुन राम्रो भएको देश हो । यहाँ सुरक्षा छ । केही भइहाल्यो भने पनि उपचार पाउन सजिलो छ ।तर पनि किन किन परदेशमा असुरक्षित महसुश हुन थालेको छ ।त्यसैले कुनबेला को र कस्तो मानिससँग नजिक भइन्छ के थाहा ? यस्तै कारणले गर्दा म र मेरा साथीहरुलाई हिजोआज डर लाग्न थालेको छ । तर पनि आत्मबल बलियो बनाएर काम गरिरहेको छु । घर फर्कने वातावरण पनि त छैन । अझ भनौं, कम्पनीले राख्ने क्याम्पको सुरक्षा त झनै फितलो छ । गाडी, ट्वाइलेट, बाथरुम, किचेन आदि इत्यादि । फरक फरक काम गर्ने ठाउँबाट एकैपटक क्याम्पमा आयो ।
अहिलेको कतारको अवस्था हेर्दा त झन् मनमा एक किसिमको डरले बास गरेको छ । दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमित संख्या बढिरहँदा यहाँको व्यपासर व्यवसाय सबै ठप्प नै छ । हरेक क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर पार्न थालेको छ । झन् श्रमिकलाई घर पठाइदिने, तलब नदिनेजस्ता खबरहरु पढ्दा असाध्यै बेचैनी हुन्छ । म पनि बेरोजगारी हुने पो हुँ कि ? भइरहेको जागिर जाने पो हो कि ? यस्तै प्रश्नले निद्रा लाग्न छाडेको छ । कोरोनाको डर त्यति छैन, जति यस्तै कुराको चिन्ता छ ।कतारको जागिर गएमा भोलि नेपाल फर्किए र के गर्ने ? कस्तो अवस्था हुने होला ? जीविकोपार्जनको लागि के काम गर्ने होला ? जागिर हुँदैन, आम्दानीको श्रोत हुँदैन कसरी जीवन चलाउने ? यो सब कुराहरु हरदम दिमागमा नाचिरहन्छ ।
आफ्नो परिवार र भबिस्यको लागि दिन रात नभनी मेहनत, परिश्रम गरेर जसोतसो आफ्नो जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्ने क्रममा छु । तर अचानक कोरोनाले धेरै असर पुर्‍याएको छ । मन मा अनेक कुराहरु खेलिरहन्छ डर चिन्ता त्रास बढिरहेको छ।अर्को तिर साहुको ऋण को चिन्ता छ भोलि गएर यहि कोरोनाको महामारिले गर्दा नेपाल फर्किनु परे के गर्नी कसो गर्नी भन्ने चिन्ताले न त निद्रा लाग्छ न त भोक।
पर्वतमा आज थप एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 83
आजको राशिफल हेर्नुहोस् 26
पर्वतमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु 88
अविस्मरणीय यात्रा 38
समाजसेवी विप्लव हमाललाई ‘कोभिड–१९ हिरो’ अवार्ड 140
आजको राशिफल 50
मध्यरातमा बाख्रा चोरी 273
डायलासिस सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने–नगरप्रमुख जोशी 169
जलजलामा भयो अनौठो घटना : जनप्रतिनिधिले घटना दबाउन खोजे, प्रहरी उजुरी दर्ता गर्न आनाकानी 371
पर्वतमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि 225
कोरानाको डर अनि त्रासले निन्द्रा नै लाग्दैन 233
Parbat@ Social Media 596
सामाजिक संजाल मा पर्बत 1637
Lespar | Discover Parbat 829
Kushma Bazaar 650
सामजिक सन्जालमा पर्बत 776
पर्वत म छिट्टै नै आउनेछु 700
शालिजा गाऊ को चिन्नारी गीत मार्फत 898
पर्यटनको सम्भावना बोकेको जलजला 1706
पर्वतका उच्च पहाडी भेगमा हिमपात 925